Colombia, obodo otutu obodo | Njem zuru oke
Colombia, obodo di iche-iche
Dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ America, Colombia bụ obodo nwere ọtụtụ agbụrụ, ite agbaze niile na agbụrụ dị iche iche. Kpọmkwem nke a akụnụba na iche iche Ọ bụ otu n'ime nnukwu obi ụtọ nke ndị Colombia na-enwe akụkụ dị mma nke isi ya.
Omenala di iche-iche na omenaala di iche-iche nke obodo South America a bu ihe sitere na ngwakọta nke agbụrụ agbụrụ atọ sitere na mpaghara atọ dị iche iche: America, Europe na Africa. Usoro a bidoro na mbata nke Spanish narị afọ ise gara aga ma na-aga n'ihu na-etolite ruo taa na mbata nke ndị si mba dị iche iche si Europe, Middle East na, na ntakịrị, mba Asia.
Na onuogugu ikpeazu emere na Colombia, imirikiti onu ogugu mmadu (ihe dika 87%, ya bu, ihe kariri nde mmadu 38) ka edeputara "na enweghi agbụrụ." A gosiputara nke a na data nke Ngalaba Na-ahụ Maka Nchịkwa Mba (DANE). Otú ọ dị, eziokwu bụ na akụkụ ka ukwuu nke ndị bi na ya bụ, ka ukwuu ma ọ bụ pekarịrị mpe, n'ihi nsị.
N'ikwu eziokwu, ụdị a nke «na - enweghị agbụrụ» na-eje ozi gụnyere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Colombia na-enweghị ike ịkọwa aha ha kpọmkwem dị ka nke Afro-Colombia (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 3) ma ọ bụ amaala (1,9 nde).
Colombia, obodo di iche-iche.
1 Isi agbụrụ nke Colombia
1.1 Ngwakọta agbụrụ
1.2 Ndị Caucasians
1.4 Igenmụ amaala
1.5 Ndị Arab
2 Okwu ọdịbendị nke Colombia
Isi agbụrụ nke Colombia
Colombia bụ otu n’ime mba nwere agbụrụ na asụsụ kacha elu n ’ụwa. Ndị a bụ otu kachasị mkpa:
Ha bụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ. Esemokwu dị n'etiti ndị Europe na ụmụ amaala America malitere site na afọ mbụ nke mmeri Spain. Na otu kacha mma Ọ bụ ọtụtụ na Colombia ma na-ahụ ya oge niile na mpaghara. A na-eme atụmatụ na ihe dịka 80% nke ndị Colombia nwere agbụrụ agbụrụ Europe na nke amaala.
Ọ bụ otu pere mpe nke agbụrụ Europe kacha. Na ndị ọcha ọ na - anọchite anya otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ ndị Colombia. Ndị nna nna ya kachasị bụrụ Spanish na, na obere, Italian, German, French na mba Slavic. Bogota na Medellin Ha bụ obodo abụọ nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị ọcha na mba ahụ.
Ọnụ ọgụgụ ndị Colombia niile gụnyere n'ìgwè a dịgasị iche dịka ọmụmụ dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ sitere na 7% gaa 25%, dabere na ma ndị ọzọ dị ka ndụzales ma ọ bụ palenqueros. O yiri ka enwere nkwekọrịta ọzọ na nkesa igwe mmadụ nke Afro-Colombia, gbasiri ike n'ụzọ doro anya na ụsọ oké osimiri Pacific. Na Ngalaba Chocó dị ka ihe atụ, otu a karịrị akarị.
Akụkụ a nke ndị Colombia bi na ya sitere na ndị isi ojii nke ndị isi ojii si n'ala ndị Africa weta na America. Taa Iwu nke Colombia nabatara ikike, ọdịbendị, ọdịnala na ọdịnala nke ndị Afro-Colombians.
Onu ogugu ndi amaala na Colombia adabalata nke ukwuu na narị afọ gara aga ma taa guzo gburugburu 4-5%. Dika onu ogugu ndi mmadu nke 2005, ihe dika okara nke ndị amaala nke mba na-lekwasị na Ngalaba nke La Guajira, Cauca na Nariño. Iwu nke 1991 mere ka amata ikike dị mkpa nke ndị a. Na ọdịbendị na asụsụ n’ime ndị a (a na-asụ asụsụ Amerindian 64 na Colombia).
Na-abịa site na mba ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ suchwa dị ka Syria ma ọ bụ Lebanọn nke malitere ịbịaru mba ahụ na njedebe nke narị afọ nke XNUMX. A na-agbakọ ya enwere ihe dị ka nde ndị Colombia 2,5 nke Arab, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ntakịrị n’ime ha na-ekwupụta na ha bụ ndị Alakụba.
Ekike ndị a na-ahụkarị maka Colombia cumbia
Okwu ọdịbendị nke Colombia
Ihe mara mma nke ngwakọta nke ndị Europe, ụmụ amaala na ndị Africa na-enye ọtụtụ okwu ọdịnala dịgasị iche iche na-eme Colombia otu obodo di iche-iche dị ka mmadụ ole na ole n'ụwa.
N'ebe ọdịbendị nke ọdịbendị obodo, Spanish gbakwunyere, n'etiti ndị ọzọ, Katọlik ma ọ bụ usoro esemokwu nke encomienda, na mgbakwunye na onyinye teknụzụ nke oge ahụ. Ndị Africa, bụ ndị e weere dị ka ndị ohu nke ụwa ọhụrụ ahụ, wetara ọhụụ ọdịnala na nka ọhụụ, nke kachasị n'ime egwu na ịgba egwu. N'azụ Nnwere Onwe nke Colombia, ndị Creoles gbalịrị iguzobe usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-egosi pluralistic. N'aka nke ọzọ, ngwakọta nke agbụrụ dị iche iche mere ka e nwee agbụrụ ọhụrụ.
Architecture, visual nka, akwụkwọ, egwu, gastronomyNa nke ọ bụla n’ime akụkụ ndị a nke ọdịbendị Colombia, njikọta nke ihe dị iche iche dị ka ihe na-eweta ọgaranya.
Karịsịa na asụsụ asụsụ Colombia pụtara iche maka ọdịiche ya. Na español, asụsụ a na-asụkarị, nwere ọtụtụ asụsụ dị iche iche. N'akụkụ aka nke ọzọ, asụsụ ala nna Ha bụ akụ akụ bara ụba bara ụba mejupụtara ihe karịrị asụsụ 60, ndị sitere na Amazonia na ndịda obodo ahụ na ndị ezinụlọ Arawak dị na mgbago ugwu.
Ọzọkwa okpukpe dị ka okwu ọdịbendị ọ na-ejide multiculturalism a. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Colombia bụ ndị Katọlik, dị ka mba na-enweghị ego, Colombia na-ekwe nkwa nnwere onwe ife ofufe na ikike nke obodo okpukpe ndị ọzọ dịka ndị Evangelicals, Ndịàmà Jehova, ndị Buddha, ndị Alakụba ma ọ bụ ndị Juu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Colombia, obodo di iche-iche
Zaghachi JUAN DAVID RANGEL
NA-AH F M AZ ANZA A
Ha kacha mma
Ọ bụ nnukwu ihe m nwere ike ikwere, ekele bụ ihe kacha mma dị mma
Zaghachi ka dayana castro
Ihe ị ga-ahụ na Japan